३६ बर्ष पछि गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघमा नेपाली कांग्रेस पक्षधर व्यवसायीको एकल नेतृत्व ! – ebaglung.com
२०७५ चैत्र १०, आईतवार १६:२२	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ चेत १० । कम्युनिष्ट निकट साझा प्यानलाई अत्याधिक मतले पराजित गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक प्यानलले पुरै सिटमा जित हाँसिल गरेर ३६ बर्ष पछि गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघमा नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायीहरु एकल नेतृत्वमा आएका छन । शनिवार देखि सुरु भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अहिले विहान घोषणा गरिएको छ ।
घोषित विवरण अनुसार कम्युनिष्ट निकट ब्यवसायीहरुको साझा प्यानललाई पराजित गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक पुरै प्यानलले अध्याधिक मतले विजयी हाँसिल गरेको हो ।
कुल ५ सय १८ मत खसेकोमा ३८ म बदर भएको थियो । सदर मत मध्ये लोकतान्त्रिक प्यानलका अध्यक्षका उमेदरवार श्रीप्रसाद भलामीले प्रतिध्वन्द्धी भन्दा झण्डै दोब्बर बढि ३०४ मत ल्याएर विजयी हाँसिल गरेका छन । कम्युनिष्ट निकट साझा प्यानलका अध्यक्ष उमेदवार दुर्गाप्रसाद पाण्डेले १६७ मत प्राप्त गरेका छन ।
त्यस्तो त तीन महिना अघि भएको अधिवेशनमा नै भलामीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरिएको थियो । सहमतिमा पाण्डले उक्त पद पहिल्लै त्यागेका थिए । त्यस्तै सोही प्यानलका उपाध्यक्षका तीनै जना उमेदवारहरु विजयी भएका छन ।
उपाध्यक्ष त्रैयः ईस्वरीप्रसाद पौड्यालले २७१ मत , मृगेन्द्रकुमार श्रेष्ठल २८५ मत र रामप्रसाद पन्थीले२५७. मत ल्याएर विजयी भएका हुन । उनका प्रतिध्वन्द्धी वीरेन्द्र भुसालले १५२ मत , दुर्गाचन्द्र बोहराले ९७ मत र रेमलाल पाण्डे उपाध्यले १२२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै महासचिवमा पनि लोकतान्त्रिक कै उमेदवार तारा भुसालले भारी मत ल्याएर विजय हाँसिल गरेका छन । भुसालले २५९ मत प्राप्त गरि विजयी भएका हुन भने उनका प्रतिध्वन्द्धी रामप्रसाद पन्थीले १५० मत ल्याएर पराजित भएका छन । सचिव पदमा पनि लोकतान्त्रिक कै राजकुमार कक्षपतिले २४६ मत ल्याएर विजय हाँसिल गरेका छन ।
उनका प्रतिध्वन्द्धी फर्शुराम पाण्डेले १४६ मत ल्याएर पराजित भएका हुन । कोषाध्यक्षमा पनि लोकतान्त्रिक कै ईश्वरीप्रसाद बेलवासेले २५२ मत ल्याएर विजय भएका छन । उनका प्रतिध्वन्द्धी रामु सुनारले १५१ मत प्राप्त गरेका थिए । लोकतान्त्रिकका सदस्यहरु पनि भारी मत ल्याएर विजयी भएका छन ।
सह–कोषाध्यक्षमा पनि लोकतान्त्रिक कै मनिराम अर्याल १८३ मत ल्याएर विजयी भएका छन । उनका प्रतिध्वन्द्धी खड्गप्रसाद श्रेष्ठले ९७ मत प्राप्त गरेका थिए । लोकतान्त्रिकका अन्य सदस्यहरु पनि अत्याधिक मत लिएर विजयी भएका छन ।
त्यसो त अन्य पदमा केहि कम्युनिष्टहरुलाई राखे पनि ३६ बर्षको ईतिहाँसमा दुई कार्यकाल कम्युनिष्टहरुलाई नेतृत्व दिए पनि अरु कार्यकाल कांग्रेस कै ब्यवसायीहरुले नेतृत्व सम्हाल्दै आएको संस्था हो । सुरु देखि हाल सम्म सदस्य संख्याको बाहुल्य रहेकोले यो चुनावी परिणामलाई कम्युनिष्ट निकट उमेदवारहरुले स्वभाविक रुपमा लिएको बताए । निर्वतमान अध्यक्ष तथा पराजित उमेदवार दुर्गाप्रसाद पाण्डेले मतदान प्रकृया सुरु नहुँदै भनेका थिए । सदस्य संख्या हामो भन्दा उनिहरुको ९० भन्दा बढि छ , त्यस माथी नयाँशक्तिको समेत समर्थन छ उहाँहरुलाई , उहाँहरुको पुरै प्यानलले जित्ने निश्चि हुँदाहुँदै पनि पछि नहटेर आफ्ना मतदाताको सम्मान गर्दै छौं ।
चोटिलो जवाफ होः कांग्रेस सभापति श्रेष्ठ
चुनावी परिणाम पछि नेपाली कांग्रेस गुल्मीका पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिकृया माग्दा उनले झण्डै चार दशक पछि पहिलो पटक भएको अध्यक्ष पद सहित दुई प्यानल विच भएको यो निर्वाचन असहज परिस्थितीका कारण भएको प्रतिकृया दिए । गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ मै बसेका केहि नेतृत्वले समानन्तर संस्था खोल्न उद्यत जुन गर्नु भयो त्यसैले असहज परिस्थिती सिर्जना गरेको हो ।
हामी पनि मिलेरै जानु पर्छ भन्ने मान्यता नै राख्दै आएका थियौं । एकातिर गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघमा भागबण्डाको सहमति गर्ने अर्को तिर समानन्तर संस्था गठनमा उद्यत हुँदै पकट जमाउन खोज्ने जसले गर्दा हामी तीन महिना अघिको सहमति तोड्न बाध्य भएका हौं ।
भएको प्रति यो निर्वाचनको परिणाम चोटिलो जवाफ हो । समानन्तर संस्था श्रेष्ठले हालै गुल्मी तदर्थ समिति गठन गरिएको चेम्वरअफ कमर्सलाई ईङ्गित गरेका हुन । जुन संस्थाले चैत्र २० देखि ३० गते सम्म प्रथम गुल्मी महोत्सव आयोजना गरिएको छ ।
आफ्ना पार्टीमा आश्था राख्ने ब्यवसायीहरु प्रति बिश्वास बढेक यो नतिजाबाट स्पष्ट भएको कांग्रेस सभापति श्रेष्ठको दावी छ । आफु निकट ब्यवसायहरुको विजयी ¥यालीमा जाने तयारी भएर होल श्रेष्ठ धेरै बोल्न चाहेनन ।
लामै बोलेर हारको खार पोखे नेकपा अध्यक्षले
महासंघको चुनावी नतिजा पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गुल्मीका अध्यक्ष वालसिंह काउछाले लामो कुरा गर्दै आफ्ना ब्यवसायीहरुको हारको खार पोखेका छन । उनले नेपाली कांग्रेसले सामाजिक संस्थामा खुलेरै राजनीति गर्नु स्थानिय तहको निर्वाचनमा पराजयको पीडाले रन्थनिनु रहेको आरोप लगाए ।
उनले भने –‘ पुरानो पार्टी भएकोले सामाजिक संघ संस्था र उपभोक्ता समितिमा नेपाली कांग्रेसमा आश्था राख्ने अलि बढि नै सख्यामा रहनु स्वभाविकै हो । जव स्थानिय तहमा पराजय भए कांग्रेसजन त्यस पछि आफ्नो पकट भएका सामाजिक संघ संस्था र उपभोक्ता समितिमा राजनीतिकरण गरेर चुनावी माहोल सिर्जना गरि – ‘ स्थानिय सक्ता गुमाउँदै नेकपा’ को हौवा पिट्ने गरिएको छ । त्यस्तो हौवाले हाम्रो सक्ता गुम्दैन थप फस्टाउँ छ ।’
उनले थपे–‘तीन महिना अघि नै भद्र सहमति भएको थियो । अध्यक्षमा श्रीप्रसाद भलामी चयन गरिएको थियो । अन्य पदमा पनि हाम्रो भद्र सहमति भई सकेको थियो । ब्यवसायीहरुको सामाजिक संस्थामा यस्तो छलछामको राजनीति गर्लान र यसरी धोका देलान भन्ने लागेको भए हाम्रा साथीहरु प्नि चुनावी तयारीमा उनिहरु झै पहिल्लै देखि जुट्ने थिए ।
उनिहरुको चुनावी अन्तिम तयारी पुरा गरि जसरी मतदान प्रकृयामा जाने उहाँहरुले रणनिती अगाडी सार्नु भयो, यसले ब्यवसायीहरु र सिंङ्गो गुल्मीका अन्य सामाजिक संघ संस्थालाई समेत राम्रो गर्दैन । यसले हामीलाई पनि पाठ सिकाएको छ ।
जहाँ सम्म गुल्मी महोत्सव गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले मात्रै आयोजना गर्नु पर्छ भन्ने केहि मानिसहरुको ढिपी छ त्यो गलत हो । किन कि उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका सबै बिषयमा ठेक्का लिने संस्था होईन , न त त्यो कैसैको पेवा हो ।
भर्खरै चेम्वर अफ कमर्स गुल्मीमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ उहाँहरु त्यसलाई कम्युनिष्टहरुको समानन्तर संस्था ठान्नु हुन्छ त्यो गलत हो । जवकी त्यसको केन्द्रिय अध्यक्ष नै नेपाली कांग्रेसका हुनुहुन्छ । त्यस संस्थाले गर्न लागेको गुल्मी महोत्सव किन मन्य नहुने उहाँहरुलाई ।
कुनै पनि महोत्सव कुनै पनि संस्थाहरुले गनु पाउने ऐन कानुन मै ब्यवस्था छ । गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका केहि साथीहरुलाई कानुन विपरित सिन्डिकेट लगाउने अधिकार कसले दियो ? के सिङ्गो गुल्मी तम्घासका गोडाचार मान्छेको मात्रै हो ?
म दवावमा परेर हो : नवनिर्वाचित अध्यक्ष
विजय घोषणा पछि छोटो प्रतिकृया दिदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले आफ्नो कारणले नभई अन्य कारणको नैतिक दवावमा परि निर्वाचनमा जानु परेको बाध्यता सुनाए । ‘मलाई त पहिले नै साथीहरुले सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गर्नु भएको थियो । चुनाव मेरा लागि गरिएको होईन । मतदान मै जान खोजेका पनि थिएनौं हामी तर अकस्मात एउटा परिस्थिती सिर्जना भयो । त्यसैको दवावमा म परेको हुँ ’–अध्यक्ष भलामीले भने ।
स्थापना काल पछिको यति लामो समय सम्म सबै पक्ष मिलेर महासंघ चलउनु भयो । अहिलेको निर्वाचनले दुई ठुला शक्ति विच कित्ताकाटको अवस्था सिर्जना भएको छ , यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडी बढ्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘ हाम्रो विद्यानमा केहि ब्यवस्थाहरु छन । त्यही ब्यवस्थाको जगमा टेकेर मैले छुटेका साथीहरुलाई समेट्ने छु । भलै पदाधिकारीमा त लैजान नमिल्ला तर अन्य तहमा निर्वाचनबाट बाहिरिनु भएका साथीहरुलाई अबस्य समेटिने छ ।’
उनले थपे–‘ निर्वाचनमा जसको पक्षमा परिणाम आए पनि महासंघलाई साझ ढंगले नै अगाढी बढाएने छ, भलामीले भने– ‘म सबै पक्ष संग सहयो र साथकोृ अपेक्षा राख्द छु ।’
यो दुर्भाग्य होः संस्थापक अध्यक्ष
नेपाल सरकारबाट वैधानिकता पाएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले २०४० सालमा हो । त्यस वैद्यानिक संस्थाका संस्थापकअध्यक्ष हुन नन्दराम भुसाल । हुन त तदर्थ समिति २०३५ सालमा गठन भएको थियो । त्यस तदर्थ समितिका अध्यक्ष थिए भिमलाल मरासीनी । सचिव थिए नन्दराम भुसाल ।
परमानन्द भण्डारी, उत्तरकुमार श्रेष्ठ र कालिदास पौड्याल सदस्य रहेर ५ बर्ष सम्म तदर्थ समिति चलाउँदै तम्घासका व्यवसायीहरुलाई संगठित गर्ने काम गरेका थिए । २०४० सालमा नन्दराम भुसालले महासंघ दर्ता गराउन अगुवाई गरे । उनि काठमाण्डौमा दुई महिना सम्म खुरी खेलेर दर्ता गराएर फर्किएका थिए ।
उनै संस्थापक भुसाल भन्छन –‘ स्थापना काल देखि यस अघिको अधिवेशन सम्म मैले सामाजिक संस्थाका रुपमा डोराउँदै आएको हुँ । सवै राजनैतिक आस्था राख्नेहरुलाई समेट्नु पर्छ यो कुनै राजनैतिक गर्ने थलो होईन । सामाजिक संस्था हो । साझा ढंगले महासंघ चलाएकै कारण हामीले बाटो घाटो क्याम्पस स्थापना र सञ्चालन लगायत थुप्रै सामाजिक कार्य गर्दै आएका थियौं , यो पाराले अब त्यस्तो सामाजिक कार्य गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ’
उनले थपे–‘यस पाली पनि मिलेरै जानु पर्छ भनेर भ्रमदुत प्रयास गरिएको हो । तर यसपाली राजनीति गरियो , हामी ब्यपापारिहरुका लागि यो दुर्भाग्य हो । २०४० देखि २०४३ साल सम्म मैले संस्थापक अध्यक्षका रुपमा महासंघ चलाएँ । पछि २०४८ साल देखि २०६० साल सम्म १२ बर्ष सहित १५ सम्म चलाएँ । सुरुको कार्यकाल बाहेक यस अवधीमा मैले एकल राजनीति नेतृत्व चलााउन दिईन । अहिले जे भएको छ त्यो दुभाग्य हो, यसले हामी ब्यापारीहरुलाई फाईदा गर्दैन ।’
उनका अनुसार उनि पछि कांग्रेस निकट कै ब्यवसायी नरप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष भए । त्यस पछि कम्युनिष्ट निकट डिल्लीराज भुसाल अध्यक्ष भए । त्यस पछि कांग्रेस नेता त्रैलाक्य प्रताव सेन अध्यक्ष भए ।
२०४८ देखि २०६० सम्म लगातार १० बर्ष कांग्रेस निकट नै रहेका नन्दपराम भुसाल अध्यक्ष रहे । उनि पछि कम्युनिष्ट निकट कृष्णप्रसाद अध्यक्ष भए । उनि पछि नेपाली काग्रेसका अखिलेश्वर प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष भए ।
यस अघिको तीन बर्षे कार्यकाल कम्युनिष्ट निकट दुर्गाप्रसाद पाण्डले नेतृत्व लिए पछि आलोपालो प्राणीको सहमति अनुसार कांग्रेस निकट श्रीप्रसाद भलामीलाई कम्ुयुनिष्टहरु कै प्रस्तावमा अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन भई रहेको तीन महिना पछि एक्कासी भाँडिएर निर्वाचन गर्नु परेको हो ।
क्षत्री समाज बगलुङको प्रारम्भिक वडा समिति गठन